1. Inona no atao hoe Acetate Epithalon?
2. Epithalon Acetate mihetsika
3. Fampiharana ny Epetalona Acetate
4. Epithalon Acetate ampiasaina ho an'ny fanondroana
5. Epithalon Acetate
7. Epithalon Acetate fihenam-bidy
8. Aiza no misy ny dokotera Epithalon acetate?
Efa nandre ve ianao? Epithalon acetate? Mikaroka momba izany ve ianao ary te hahafantatra ny zava-drehetra momba izany? Raha eny, ity lahatsoratra ity dia hanampy anao amin'ny famelanao anao momba Epithalin Acetate. Ity lahatsoratra ity dia hanana fahalalana lalina momba io zava-mahadomelina io. Ireo ampahany maro amin'ity lahatsoratra ity dia toy izao manaraka izao:
Epithalon acetate (CAS: 307297-39-8) dia karazana peptide ary fantatra ihany koa amin'ny fanafody anti-aging. Ny anarana hafa izay fantatra amin'ny hoe Epithalon, Epithalone, Ala-Glu-Asp-Gly, UNII-O65P17785G ary maro hafa. Fantatra fa ny Epithalon Acetate, dia novolavolan'ny Institute of Bioregulation sy Gerontology ao St. Petersburg. Ity zava-mahadomelina ity dia singa iray mavitrika amin'ny atiny kely izay hita ao amin'ny atidohantsika fantatra amin'ny hoe pineal. Taorian'ny fikarohana lalina, dia hita fa mampitombo ny halavan'ny telomere ao amin'ny selan'ny ra ny olona taonan'ny 60-80years. Tao amin'io fianarana io ihany dia hita fa avy amin'ireo olona nomena ity medikaly ity dia nomena ny vokatra tsara ny 90%.
Amin'ny fampitomboana ny halavan'ny telômera ao amin'ny efitrano fitsaharan'ny vondron'olona efa antitra, dia manampy amin'ny fitazonana ny vatana mba hijanona ho matanjaka sy salama.
Hatramin'izao dia fantatsika fa ity medikaly ity dia afaka mamonjy aina ary afaka miasa ho toy ny zava-mahadomelina miady amin'ny alikaola. Amin'izao fotoana manaraka izao, hiresaka momba ny zava-mahadomelina ny zava-mahadomelina Epetiola.
2. Epithalon Fihetsika mihetsika
Amin'ny alalan'ity teboka ity, dia ho fantatray momba ny rafitra na ny fampiasana zava-mahadomelina trondro Epithalon amin'ny asa. Epithalon acetate dia tahaka ny vovoka fotsy, ity vovoka ity dia azo ampiasaina amin'ny rano, fa amin'ny toe-javatra sasany dia aleony mionona miaraka amin'ny volo malemy 1% amin'ny asidra acetic. Ity medikaly ity dia miorina tanteraka amin'ny hafanana amin'ny efitra. Ny zava-maniry ao amin'ny Epithalon acetate dia Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - ((S) -3-carboxy-1 - ((carboxymethyl) amino) -1-oxopropan-2 -yl) Amino) -5-oxopentanoicacid). Ny tena fisian'ny fitsaboana ity fitsaboana ity dia miditra ao amin'ny vatan'ny marary izay misy aretina manokana na maromaro, aorian'izay miditra ao amin'ny vatana amin'ny marary dia mivantana mivantana ny organia na ny tavy. Raha mamono mivantana ireo sela izay manaparitaka ny aretina, amin'ny fanaovana izany dia mamono ilay aretina araka ny tokony ho izy.
3. Applications ny Epetlona Acetate
Amin'ity lafiny ity, dia ho fantatsika ny momba ny fampiharana ny Epithalon Acetate.
Anti-fahanteranaNy fampiharana voalohany an'io zava-mahadomelina io dia manampy amin'ny fampihenana ny fahanterana. Io fanafody io dia ampiasaina eran-tany amin'ny ankapobeny noho izany antony izany indrindra. Ny zava-mahadomelina Epithalonacetate no tsara indrindra amin'izany, karazana fikarohana maro eran-tany no natao, ary ny vokatra azo avy amin'ny fianarana rehetra dia tena tsara, tsy misy ny tranga ratsy toy izany, izay nahitana ny fikarohana.
AntioxidantNy Epithalon Acetate fanafody dia miasa koa amin'ny antioxidant. Miaraka amin'ny fanampiana ofantioxidants izay atolotra amin'ity zava-mahadomelina ity, maro ireo olona nahazo tombontsoa goavana. Miaraka amin'ny fanampian'ireny antioxidants ireny, dia mihena ny fahasimbana vita amin'ny sela ao amin'ny sela ao amin'ny fiasantsika isan'andro. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamantsika amin'ny ankapobeny io fihenan'ny aloka io. Betsaka kokoa ny soa azon'ireo Epithalon Acetate ireo, izay manampy olona maro any isan'andro.
Telomere- Ny fampiharana hafa amin'ity fitsaboana ity dia manampy amin'ny fampitomboana ny halavan'ny telomere ao amin'ny cellules. Ny fanafody ho an'ity tanjona ity dia omena ny olona mitovy taona amin'ny 65 hatramin'ny taona 80.
Researchtanjona- Ny fampiharana farany amin'ity fitsaboana ity dia ny fampiasana azy ho an'ny tetik'asa fikarohana amin'ny aretina isan-karazany amin'ny biby isan-karazany. Amin'ny ankabeazan'ireo tranga dia mahazo vokatra tsara isika, ary namono aretina toy ny sela homamiadana sy maro hafa koa, izay tsy vitan'ny ankamaroan'ny fanafody any.
4. Epithalon Tombontsoa azo amidy
Misy tombony maro amin'ny zava-mahadomelina Epithalon Acetate hafa pahaizana antitra Amin'ny ankapobeny, Hiresaka momba ny tombontsoa hafa amin'ity zava-mahadomelina ity isika izay tsy dia fantatry ny olona any-
♦ Fampitomboana ny androm-piainana
Alohan'ny hampiasana an'io zava-mahadomelina io ho an'ny olombelona, ​​dia natao tamin'ny biby maro ny fikarohana izay tsy nisy ny biby naratra; Noho izany, ny vokatr'ireo fikarohana ireo dia vokatry ny fihenan'ny 11 amin'ny 17percent ny fiainan'ireo biby ireo. Ho an'ny biby samihafa, ny hafainganam-piainana dia samy hafa.
Taorian'ny fikaroham-bolo nataon'ireo biby ireo, dia taorian'ilay fanafody natao hampiasaina ho an'ny olombelona koa, izay nahitana vokatra tsara ihany koa ity fanafody ity. Satria tsy maintsy fantarinao fa amin'izao fotoana izao dia ny androm-piainan'ny olona velona dia manodidina ny 40 ka hatramin'ny 50 taona indrindra, noho izany, amin'ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io dia afaka mampitombo izany fiainana izany hatramin'ny 16 isan-jato isika. Ny androm-piainan'ny androm-piainan'ny 60-70.
♦ Fampitomboana ny asan'ny enzyme
Rehefa mitombo ny olona iray ka mivarotra izany, dia manomboka mihena ny enzymes. Noho izany, ny trangan'aretina epithalon acetate dia manampy amin'ny fampitomboana ny asan'ny enzyme ao amin'ny vatantsika.
Ireo hetsika enzyma ireo dia tompon'andraikitra amin'ireo hetsika amin'ny ankapobeny izay mitranga ao anatin'ny vatantsika miaraka amin'ny fanampian'ny asa rehetra ataon'ny vatantsika. Ny fihenan'ny fihanaky ny atidoha dia olana goavana satria tsy afaka namantatra ireo olana ireo ny olona taorian'ireo karazam-pihetseham-pandrenesana maro samihafa fantatra amin'ny.
♦ Melatonin sekretera sy rhythms circadian
Avelao aho aloha hitantara aminao ny zava-drehetra momba ny sekretera melatonin sy ny rhythms marefo.Melatonin dia novolavolaina tamin'ny fisidinan'ny pineal, izay hita ao amin'ny atidohantsika, ity sekretera ity dia tsy mijery ny tena ilaina, saingy tena ilaina izany satria noho io sekretera io dia maro ny vokatra ara-tsaina sy mifandray amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona. Raha ny rhythms ciriody dia dingana anatiny ary tena voajanahary tanteraka, ity fanampiana ity dia manota ny tosiky ny torimaso.
Amin'ity tranga ity, ny fitsaboana eran-tongotra epetalon dia manampy amin'ny dingana isan-karazany toy ny tsy hisy ny fiantraikany ara-tsaina, ary io fitsaboana io koa dia manampy amin'ny fiakarana fitsangatsanganana tsara kokoa. Ireo izay sahirana mafy matory amin'io tranga io dia tena mahasoa ho azy ireo ny zava-mahadomelina.
♦ Miady amin'ny homamiadana
Nandritra ireo fikarohana natao tamin'ny taham-pahavitrihana sy totozy, nandritra ny valin'ny fanadihadiana, dia hitanay fa ity medikaly acetate ity dia mamokatra sela toy izany izay manampy amin'ny fahafatesan'ny sela homamiadana. Taorian'ny nahafantarana izany, biby maro voan'ny homamiadana no nomena ny doka tamin'ity fanafody ity, ary tamin'ny fomba mahagaga dia nanasitrana tsara izy ireo, satria maty ny sela rehetra voan'ny homamiadana.
Rehefa vita ny fikarohana, dia nomena ny mararin'ny homamiadan'ny olona io fanafody io, ary raha ny marina, dia niasa tsara io zava-mahadomelina io, ary indraindray dia nanasitrana ilay izy. Io zava-mahadomelina io dia miasa mivantana amin'ny sela sy ny fototarazo manokana izay mampivoatra ny homamiadan'ny vatan'olombelona.
Ny aretina dia karazana aretin-maso; Amin'ity tranga ity dia mihena ny tehina eo imason'olona. Ity fanafody ity dia manampy amin'ny fanasitranana aretina amin'ny maso. Io aretina io koa dia nositranina voalohany tamin'ny biby; Eny, raha naka ny toerana ho an'ny biby ny fikarohana, dia mihoatra noho ny 90% ny biby no sitrana. Taorian'io, rehefa nomena fanafody ho an'ny marary olombelona io fanafody io, manodidina ny 90% ny marary dia sitrana avy amin'io aretina io.
♦ Manatsara ny antioxidant
Nambarako ny momba ny fampiasana sy ny maha-zava-dehibe ny antioxidants. Manjavona ny fizotry ny sela izy ireo, miaraka amin'ny fanampiana izay ahafahantsika mandamina ny dingana efa antitra. Hita daholo ireo seza rehetra rehefa natao ny fikarohana natao tamin'ny biby. Rehefa fantatrao fa ity fanafody ity dia manampy amin'ny fampivoarana ny antioxidant, dia nomena ireo biby izay tsy ampy antioxidant io fanafody io, ary taorian 'ny fianarana, dia voamarika fa ity fanafody ity dia manampy amin'ny fampivoarana antioxidants amin'ny vatan'ny biby. Taorian'ny nahitana vokatra tsara, dia nomena ireo mararin'ny aretina io fanafody io, nomena io fanafody antioxidant io, ary nanampy azy ireo amin'ny fampihenana azy ireo ny dingana simika simika.
Satria tsy maintsy fantarinao fa ny zava-drehetra dia misy tsara sy misy vokany ratsy ihany koa. Toy izany koa ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny epithalon acetate. Hatramin'izao, fantatrao ny tombontsoa azon'ity zava-mahadomelina ity, saingy amin'izao fotoana izao, dia ho fantatrao ny vokatry ny zava-mahadomelina. Maro ny karazana fikarohana natao, saingy hatramin'izao, tsy hitantsika fa misy fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina ity. Ny vokatra tokana azonay dia ny hoe rehefa nifanakalozanay izahay dia nanampy tamin'ny fampitomboana ny telomere ny cellule de epitombana acetate ao amin'ny taonan'ny 60 ka hatramin'ny 80 taona. Ny fiantraikany dia ny hoe amin'ny lafiny sasany, io, fanafody dia nanao fiantraikany ratsy ihany koa.
Ity vokatra ity, amin'ny toe-javatra sasany, dia lasa toy izany koa fa ny fiainan'ny olona dia very ihany koa amin'ity vokany ity.
Izany no hany vokatra niarahana izay efa hitanay hatramin'izao aorian'ny fampiasana an'io fanafody io mandritra ny taona maro. Ity zava-mahadomelina ity dia fanafody mamonjy aina, saingy ny toe-javatra izay tsy mahomby, na azontsika lazaina fa mifanohitra amin'izany dia manodidina ny tranga 10%, raha ny tranga 90% dia manasitrana ny olan'ny marary izany. Mety misy trangan-javatra mety hitranga, tsy misy ny fanamarihana toy izany, fa nahoana no tsy mahomby ny fitsaboana amin'ny tranga sasany? Maro ny karazana fikarohana momba ny tranga diso, saingy tsy nisy na inona na inona tonga teo an-tanantsika.
6. Epithalon afampiasana cetate ho fanohanana
Ny zava-mahadomelina tsirairay dia manana dingan-tena, ary ity no maha-zava-mahadomelina toy izany dia manana dosim-pahamendrehana, ary raha misy olona tsy mandray an'io fanafody io araka io dosage io, dia mety ho diso koa izy ireo. Andeha hojerentsika ny dosage mety amin'izany fitsaboana izany, azafady mba hijery azy tsara.
Ny dosage amin'ity fitsaboana ity dia miankina amin'ny aretina amin'ny karazana aretina azonao ity zava-mahadomelina ity. Misy fomba telo samihafa sy karazana dosage telo samihafa, ary izy ireo no mahomby indrindra, iray mahomby ary iray mahomby indrindra. Miankina aminao fotsiny fa ny karazana dosage tokony horaisinao dia azonao atao ny manatona dokotera momba ny dosage. Noho izany ny dosage dia:
Epithalon acetate dosage (kely indrindra mahomby)
Faharetana-Ity fanafody ity dia tokony haka aorian'ny fotoana mety, ary ho an'ny medikaly mahavelona, ​​dia tokony hitondra an'io fanafody io eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 20 andro.
Dosage-Izany dia midika fa ny habetsaky ny fitsaboana tokony horaisinao, ary izany dia 400 to600 mg Epithalon isan'andro.
DailyFrequency- Ny faharetan'ny fanafody isan'andro dia 200 mg isaky ny manompo.
Epithalon Acetate dosage (mahomby mahomby)
Ity fanafody ity dia mety ho tafiditra amin'ny tsiranoka na tsiranoka na ranomaso, amin'ity teboka ity dia ho fantatsika momba izany tahotra izany.
Duration - Ny faharetan'ny fanafody toy izany dia mitovy amin'ilay voalaza etsy ambony, izay eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 20 andro.
Dosage-Ny dosage amin'ny ranomafana sy ny fery dia eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 30 mg amin'ny andron'ny Epithalon.
Dailyrequency- Ny isa isan'andro dia azo zaraina ho servieta telo isan'andro.
Injectable Epithalon acetate dosage (ankamaroanymahomby)
Ny fomba farany eo ambanin'ny zoro dosage dia ity fomba fitsaboana ity. Amin'io fomba io, manome fanafody ny fanafody, ary io fomba io dia fantatra amin'ny fomba mahomby sy mahomby indrindra. Ny dosage amin'ity fomba ity:
Duration - Ny faharetan'ity fomba fitsaboana ity dia mitovy amin'ny fomba hafa ihany, izay ao anatin'ny 10 hatramin'ny andro 20.
Dosage-Ny dosage amin'io fomba io dia 5 amin'ny 10 mg isan'andro.
Fahasamihafana - Ny hafanan'io fanafody io dia fampidiran-tsakafo isan'andro ho an'ny doka ambany kokoa, fa ny iray dia afaka mandray indroa isan'andro isan'andro.
Ny fizotry ny fomba isaky ny 10 ka hatramin'ny 20 andro, aorian'ny famenoana ity lalana 10-20 andro ity, dia tokony hanana banga feno amin'ny 4to 6 volana ianao, ary aorian'izany dia afaka mamerina ilay fanafody. Ity fampatsiahivana ity dia ho an'ny dingana telo.
7. Epithalon Toerana fitehirizana entana
Tokony ho voamarikao ao amin'ny boaty misy fanafody sasantsasany izay nosoratany tamin'ny taratasy sora-baventy izy ireo, teo ambanin'ny boaty izay nomeny ny fitehirizana izany fanafody izany. Misy fanafody sasantsasany ao amin'izy ireo ka tsy azo fehezina eo ambany elanelam-potoana. Noho izany zava-mahadomelina izany dia misy ny fepetra tokony hapetrak'izy ireo ary tokony horaisina raha tsy ampiasaina. Ity koa dia manana Wiki puzzle.svg toe-javatra, hiresaka momba ireo fepetra ireo izahay.
Ny fepetra tokana izay soso-kevitra eto dia ny tokony hajaina ao amin'ny toerana mangatsiaka toy ny fridge. Voalaza fa raha mitandrina amin'ny toerana mafana izy dia mety hanimba ny zava-mahadomelina izany. Ao amin'ny tsirairay, dia misy 98% peptides madio, izay tokony hapetraka ao ambany mangatsiaka ary tsy tokony halefa amin'ny hafanana mivantana. Mety hisy vokany amin'ny fahadiovan'ny peptides koa izany.
Io no hany tokana fitehirizan-tsakafo nampidirina tao an-tsainao.
8. Weto mba hividianana zava-mahadomelina epithalon acetate?
Misy ihany koa ireo mpivarotra an-tserasera sasany mivarotra ity zava-mahadomelina ity, satria misy karazana amino saro-baventy. Noho izany raha te hividy ny zava-mahadomelina epithalon acetate ianao, dia afaka mahita izany mora eny anaty aterineto sy afaka mividy epithalon actate. Halefa any an-tranonao izy mandritra ny fotoana voafaritra.
Maro ny olona sandoka any, izay mivarotra zava-mahadomelina na hosoka amin'ny aterineto, tokony hikaroka araka ny tokony ho izy ny orinasa sy ny mpivarotra avy any amin'izay hividiananao ity zava-mahadomelina ity. Tsy tokony hividy fanafody hafa avy amin'ny mpandraharaha ara-barotra vaovao ihany koa ianao, satria fitsikerana ity fitsaboana ity ary mitaky andraikitra eo amin'ny fiainan'ny marary izy, noho izany dia tokony hino sy hividy fanafody amin'ny mpitsabo fotsiny ianao.
Izany rehetra izany dia momba ny zava-mahadomelina Epithalon Acetate, ato amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahafantatra momba ireo zavatra isan-karazany toy ny Epithalon acetate, Epithalon dia manintona anti-aging, fampiharana ny zava-mahadomelina Epetalona etetika ary zavatra maro hafa momba ity zava-mahadomelina ity izay mamonjy aina ho an'ny maro.
Fantatray fa manampy ny fampihenana ny habetsaky ny telomere, izay misy ao amin'ny sela mpitsabo, izay mitsofotsofoka avy amin'ny trangam-piainana aty amin'ny atidoha. Tsy vitan'ny hoe manampy an'io fanafody io ny fanafody. Manampy amin'ny famonoana ny sela homamiadan'ny olona iray izany.
Aorian'izany, fantatsika momba ny mekanika ity zava-mahadomelina ity ary nandroso amin'ny ampahany izay nanambarantsika momba ny fampiharana ny zava-mahadomelina Epetalona. Fantatray ihany koa ny tombotsoan'ny zava-mahadomelina ity, izay nahafantarantsika ny soa entin'ity zava-mahadomelina ity.
Manalavitra an'izany, fantatsika ny dosage avy amin'ny zava-mahadomelina ety amin'ny Epithalon. Ny olona izay maka ity zava-mahadomelina ity dia tokony hikarakara foana ny fanafody fanafody ary tokony haka fanafody ara-potoana araka izay efa voalaza. Amin'izao fotoana manaraka izao dia fantatsika ny vokatry ny fanafodin'ity fanafody ity, ary aorian'izany dia fantatsika ny fepetra fitsaboana an'io fanafody io. Tsy nisy afa-tsy fitehirizana iray monja, ary farany, fantatsika fa avy aiza no afaka mividy ity zava-mahadomelina ity ary inona no tokony hatao rehefa misy mividy.